Isivikelo sezokwelapha | I-Foundation Foundation - Uthando, Ubulili kanye ne-intanethi
Ikhaya Resources Wokuziphendulela kwezokwelapha
Lesi sitatimende yisimemezelo sezokwelapha se-The Reward Foundation. Lewebhusayithi iqukethe ulwazi jikelele mayelana nezimo zezokwelapha kanye nokwelashwa. Ulwazi aluyona iseluleko, futhi akufanele lugcinwe njengalokhu.
Ulwazi lwezokwelapha kulewebhusayithi luhlinzekwa "njengokungathi" ngaphandle kwemibono noma iziqinisekiso, ukuveza noma ukuphawula. I-Reward Foundation ayikho imibono noma iziqinisekiso ngokuphathelene nolwazi lwezokwelapha kuleli webhusayithi.
• Ulwazi lwezokwelapha kulewebhusayithi luzohlala lukhona, noma lukhona nhlobo; noma
• Ulwazi lwezokwelapha kulewebhusayithi luphelele, liyiqiniso, linembile, lisesikhathini, noma alukhohlisi.
Akumelwe uthembele kolwazi kule webhusayithi njengesinye iseluleko sezokwelapha esivela kudokotela wakho noma omunye umhlinzeki wezempilo ochwepheshe.
Uma unemibuzo ethile mayelana nanoma yiluphi udaba lwezokwelapha kufanele uxhumane nodokotela wakho noma omunye umhlinzeki wezempilo ochwepheshe.
Uma ucabanga ukuthi ungase uhlupheke kunoma yisiphi isimo sezokwelapha kufanele ufune usizo lwezempilo ngokushesha.
Akufanele nanini ukulibala ukufuna iseluleko sezokwelapha, ukunganaki iseluleko sezokwelapha, noma ukuyeka ukwelashwa ngenxa yolwazi kule webhusayithi.
Akukho lutho kulokhu kukhishwa kwemithi kuzokwehlisa noma yiziphi izikweletu zethu nganoma iyiphi indlela engavunyelwe ngaphansi komthetho osebenzayo, noma ukukhipha noma yiziphi izikweletu zethu ezingahle zingavunyelwe ngaphansi komthetho osebenzayo.
Lo mbhalo wadalwa kusetshenziswa ithempulethi yeConstology etholakala ku-http: //www.freenetlaw.com.